IPL का बाँकी म्याचका लागि सन्दीप यी दुई टिममा अनुबन्ध हुने सम्भावना » Onlycricnepal
IPL का बाँकी म्याचका लागि सन्दीप यी दुई टिममा अनुबन्ध हुने सम्भावना
२१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १४:१३
काठमाडौंः १४औँ सिजनको आईपीएलका बाँकी म्याचहरू यूएईमा हुँदैछन्। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ले हालै बाँकी खेलहरू यूएईमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आईपीएलका बाँकी खेलहरू सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा आयोजना गर्ने बीसीसीआईको तयारी छ। बीसीसीआईले मिति भने घोषणा गरेको छैन। भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि बीसीसीईले २९ खेलपछि आईपीएल स्थगित गरेको थियो।
आईपीएलका प्लेअफसहित ३१ वटा खेलहरू हुन बाँकी रहेका छन्। ती म्याचहरू अब यूएईमा हुनेछन्। अब बाँकी रहेका म्याचहरु २५ दिनभित्र सक्ने बीसीसीआईले योजना बनाएको छ।
तर, लगातार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका कारण धेरै क्रिकेट बोर्ड र खेलाडीहरूले आईपीएलका बाँकी खेलमा भाग नलिने भएका छन्। इंग्ल्याण्ड क्रिकेट बोर्डले खेलाडीहरू आगामी आईपीएलमा खेल्न सक्षम नहुने स्पष्ट भनेकको छ। यसबाहेक अष्ट्रेलियाली खेलाडीहरू पनि आईपीएलका बाँकी खेलमा उपलब्ध हुने छैनन्।
हाललै बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले आफ्ना दुई खेलाडी शाकिव अल हसन र मुस्तफिजुर रहमानलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिन अस्वीकार गरेको छ।
बोर्डले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नदिने भएपछि शाकिव र मुस्ताफिजुरले आईपीएलको बाँकी खेल गुमाउने जनाइएको छ। शाकिव आईपीएल टिम कोलकता नाइट राइडर्स र रहमान राजस्थान रोयल्समा आवद्ध छन्।
बंगलादेश क्रिकेट बोर्डका अध्यक्ष नजमुल हसनले आईपीएल समय व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय तालिका भएकोले दुवै खेलाडीले एनओसी नपाउने जानकारी दिए। अध्यक्ष हसनले विश्वकपको तयारीका लागि व्यस्त तालिका भएकोले शाकिव र मुस्ताफिजुरले एनओसी नपाउने बताएका हुन्।
मुख्य खेलाडी नै खेल्न नआउने भएपछि केकेआर र राजस्थान टिम समस्यामा परेका छन्। इंग्ल्याण्डका सीमित ओभरका कप्तान इयोन मोर्गन, अष्ट्रेलियाका फास्ट बलर पाट कमिन्स, बंगलादेशका अलराउन्डर शाकिव केकेआरमा आवद्ध छन्।
यस्तै, इंग्ल्याण्डका चार स्टार खेलाडी टोलीका राजस्थानमा आवद्ध छन्। जसमा बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जोस बटलर र लियाम लिभिङ्स्टोन छन्।
इंग्ल्याण्डका जोनी बेयरिस्टो र जेसन रोय हैदराबाद, टम करन, साम बिलिङ्स र क्रिस वोक्स दिल्ली क्यापिटल्स, क्रिस जोर्डन र डेविड मलान पञ्जाबमा आवद्ध छन् भने मोइन अलि र साम करन चेन्नईसँग जोडिएका छन्। यी खेलाडीमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय टिमका महत्वपूर्ण सदस्य हुन्।
इंग्ल्याण्डले सेप्टेम्बर १४ सम्म भारतसँग टेष्ट सिरिज खेल्नेछ। त्यसपछि उसले अक्टोबर १४ र १५ तारिखमा पाकिस्तानसँग दुई खेलको टी–२० सिरिज खेल्नेछ।
व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय सेड्युल र टी–२० विश्वकप तयारीका कारण इंग्ल्याण्डका खेलाडी आईपीएलका बाँकी म्याचमा सहभागिता जनाउन सम्भावना निकै कम रहेको हो।
त्यस्तै, अष्ट्रेलियाले पनि आफ्ना खेलाडीलाई आईपीएलका बाँकी म्याच खेल्न अनुमति नदिने सम्भावना छ।
स्टिभ स्मिथ, डेविड वार्नर, प्याट कमिन्स, ग्लेन म्याक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, झय रिचडर्सन, एडम जम्पा, रिली मेरिडीथ, बेन कटिङ, नाथनकुल्टर नाइल अष्ट्रेलियाका खेलाडी आईपीएलका विभिन्न टिममा आवद्ध छन्।
त्यस्तै, क्रिस लिन, मोइसेस हेनरिक्स, केन रिचडर्सन, एन्ड्रयू टाय, डानियल साम्स, ड्यान क्रिस्टियनलगायत पनि आईपीएलका विभिन्न टिममा अनुबन्ध छन्। यीमध्ये धेरै खेलाडी अष्ट्रेलिया टिमका महत्वपूर्ण सदस्य हुन्। प्याट कमिन्सले यसअघि नै आईपीएल नखेल्ने जनाइसकेका छन्।
आईपीएलमा फेरि सन्दीपलाई मौका
नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछाने यस वर्षको आईपीएल मिनी अक्सनमा बिक्री हुन सकेनन्।
आईपीएल २०२१ को अक्सनमा सन्दीपले ४० लाख भारु बेस प्राइसका साथ नाम दर्ता गरेका थिए। अक्सनबाट भने उनलाई कुनै पनि टिमले अनुबन्ध गरेनन्।
यद्यपि, अब यूएईमा हुने आईपीएलका बाँकी म्याचमा सन्दीपले मौका पाउने सम्भावना बलियो रहेको छ। आईपीएल टिममा आवद्ध विदेशी स्पिनरहरूले बाँकी म्याच गुमाएको खण्डमा सन्दीपले मौका पाउने सम्भावना बलियो रहेको हो।
सन्दीपले केकेआरका शाकिवअल हसन र आरसीबीका एडम जम्पाको स्थानमा मौका पाउन सक्छन्। सन्दीप वर्तमान विश्व क्रिकेटका राम्रो लेगस्पिनरमध्य एक हुन्। सोही कारण पनि आईपीएलका बाँकी म्याचमा उनले मौका पाउने सक्छन्।
उनीसँग आईपीएल खेलिसकेको अनुभव पनि रहेको छ। उनले यसअघि तीन सिजन दिल्ली क्यापिटल्ससँग बिताइसकेका छन्। जसमा उनले दुई सिजनका केही म्याचमा मौका पाएका थिए। र, ती म्याचहरुमा उनले उत्कृष्ट प्रदर्शनसमेत गरेको थिए।
सोही प्रदर्शनका कारण सन्दीपले अहिले विश्वका नाम चलेका चर्चित टी–२० लिगहरू खेलिरहेका छन्। यदि सन्दीपले आईपीएलमा मौका अवसरमा उनले ४० लाख भारु बेस प्राइस नै पाउनेछन्।
यसअघि उनले दिल्लीमा तीन सिजन बिताएका थिए। तत्कालीन दिल्ली डेयरडेभिल्सले सन् २०१८ को अक्सनमा सन्दीपलाई २० लाख भारुमा अनुबन्ध गरेको थियो।
सन्दीपले आईपीएल खेलेका कुल ९ खेलमा १३ विकेट लिएका छन्। सन् २०१८ मा ३ खेलमा ५ र २०१९ मा ६ खेलमा ८ विकेट लिएका थिए। आईपीएलमा सन्दीपको उत्कृष्ट बलिङ ४ ओभरमा ३६ रन दिएर तीन विकेट लिनु हो।
गत वर्ष यूएईमा भएको १३औँ संस्करणको आईपीएलमा दिल्ली पहिलोपटक फाइनलसम्म प्रवेश गर्दा सन्दीप भने बेन्चमै रहेका थिए।
सन्दीपले आईपीएलमा रोयल्स च्यालेन्जर्स बैंग्लोरविरुद्ध सन् २०१८ मा डेब्यू गरेका गरेका थिए। उनले डेब्यू खेलमा चार ओभर बलिङ गरी २५ रन खर्चेर एक विकेट लिएका थिए।
आज मुम्बई र पञ्जाब भिड्दै, यस्तो छ सम्भावित प्लेइङ-११
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:५७
आइपीएलमा सर्बाधिक क्याच पक्रिने ५ विकेटकीपर, धोनी छैनन् शीर्ष स्थानमा!
२८ फाल्गुन २०७६, बुधबार ११:४४
आईपीएलको अक्सन आज, सन्दीप बिक्ने सम्भावना कति?
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०९:०३
धोनीको नाममा जोडियो अर्को कीर्तिमान, पञ्जाबविरुद्ध सिएसकेको शानदार जित !
१९ आश्विन २०७७, सोमबार ०२:२६